Ny fampiharana rindrambaiko mangarahara tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Raha te-hahagaga ny namanao ianao dia tsy misy fomba tsara kokoa noho ny mampiasa a rindrina seamless ao amin'ny fitaovantsika finday, background mangarahara izay manome ny fiheverana fa tsy eo ivadiky ny finday avo lenta misy antsika sy ny toerana misy ireo sary famantarana fampiharana mitsinkafona amin'ny rivotra.
Na dia marina aza fa mahavariana endrika estetika ireo fampiharana ireo dia manolotra a fanjifana batterie be dia be, noho izany dia tsara ny hampiasana azy io mba hanaovana vazivazy fotsiny amin'ireo namantsika. Raha ampiasaintsika tsy tapaka izy io, dia hiala haingana ny baterin'ny fitaovantsika.
Izany dia satria ny rindranasa, raha tsy asehon'izy ireo ny fomba hafa, dia asehoy tsy tapaka ny sary izay ao ambadiky ny fakantsary, na dia mampiasa rindrambaiko feno aza izahay. Raha tsy te hampiasa azy io vetivety fotsiny ianao, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny ajanony ny fandefasana ambadika.
Ireo karazana fampiharana ireo ihany azonao atao ny mangataka anay alalana amin'ny fakantsary fakantsary. Tsy misy alalana hafa angatahin'ilay rindrambaiko, tsy maintsy ekentsika izany, na amin'ny toerana, na antso, na hafatra ... Raha mila alalana fanampiny hiasa ilay rindranasa, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny manaisotra haingana avy ao amin'ny terminal anay.
Raha vantany vao mazava momba ny fomba fiasan'izy ireo sy ny fepetra tsy maintsy raisinay raha tsy tianay ny hilatsaka haingana ny baterin'ny fitaovantsika, dia hasehonay anao fampiharana rindrambaiko mangarahara tsara indrindra ho an'ny fitaovana Android.
Ireo sary miaraka amin'ireo fampiharana dia manome fahatsapana fitaka, satria ny tanantsika dia tsy haseho mihazona ny terminal mihitsy, satria ny fakan-tsarin'ny fitaovana dia eo an-tampon'ny fitaovana ary tsy manana zoro ampy hanehoana ny tanantsika izy.
Azontsika atao ny milaza fa karazana izany dokambarotra mamitaka izay niely tamin'ny mpamorona rehetra an'ity karazana fampiharana ity hanazavana ny fomba fiasany.
1 Pikantsary mangarahara sy sary an-tsary mivantana
2 Screen mangarahara - 3D Wallpapers
3 Pikantsary mangarahara sy sary an-tsary mivantana
4 Pikantsary mangarahara
5 Pikantsary fakan-tsary mangarahara
6 Pikantsary mangarahara
7 Horonan-tsary mivantana an-tsary
Pikantsary mangarahara sy sary an-tsary mivantana
Miaraka amin'ny fisintomana mihoatra ny 10 tapitrisa, hitantsika ny rindrambaiko Transparent sy sary miaina mivantana, fampiharana izay manana salan'isa 4,6 kintana amin'ny 5 azo atao taorian'ny nahazoana hevitra maherin'ny 230.000.
Ity rindrambaiko ity dia ahafahantsika mampiasa ny sary fakan-tsary mivantana ho toy ny valiha misy a effet parallax izay manome valiny mahafa-po mihoatra ny. Amin'ny tsindry iray monja dia azontsika atao ny manolo ny sarin'ny fakantsarantsika amin'ny sarin'ny fakantsary.
Azo zahana ny efijery mangarahara sy ny sarimiaina mivantana misintona maimaim-poana, misy doka fa tsy misy fividianana fampiharana.
Screen mangarahara - 3D Wallpapers
Transparent Screen dia rindrambaiko mamela antsika hampiasa rindrambaiko mangarahara amin'ny fitaovantsika. Izy io dia manana salan'isa 4,6 kintana amin'ny 5 azo atao aorian'ny nahazoana hevitra mihoatra ny 100.000 XNUMX. Raha ny fanazavan'ilay mpamorona dia namboarina tsara ny fampiharana mba tsy hisy fiantraikany lehibe amin'ny androm-piainany.
Azo ampiasaina ity application ity ho anao misintona maimaim-poana, Izy io dia misy doka fa tsy misy karazana fividianana ao anatin'ilay fampiharana, toy ny sisa amin'ireo rindranasa izay asehonay anao amin'ity lahatsoratra ity.
Ity rindrambaiko ity dia manana salan'isa 4.4 kintana amin'ny 5 azo atao, taorian'ny nampidinana tamina fitaovana maherin'ny 5 tapitrisa ary efa vnatolotry ny mpampiasa 12.000 mahery.
Tsy toy ny rindranasa hafa, mamela antsika ny efijery mangarahara sy ny sary miaina mivantana ampiasao ny fakantsary aloha sy aoriana ary amin'ny tsindry iray monja dia azontsika ampiasaina ny sary avy eo aloha sy aoriana fakan-tsary ho valiha.
Transparent Screen dia fampiharana tsara sy mahafinaritra izay hanampy anao hampiasa background mangarahara eo amin'ny efijeryo. Misaotra an'ity fampiharana ity dia afaka izahay ampiasao toy ny mahazatra ny finday avoakanay, raha afaka mahita ny sary mivantana an'ny fakantsaranao eo amin'ny efijery izahay.
Ity fampiharana ity dia manao mangarahara ireo rindranasa, amin'izay afaka manohy mampiasa ny finday avo lenta tsy misy olana izahay. Ho fanampin'izay, isika avelao jerena izay alehantsika raha mampiasa ny smartphone izahay.
Azo ampiasaina ity application ity ho anao misintona maimaim-poana, misy doka fa tsy misy fividianana fampiharana.
Pikantsary fakan-tsary mangarahara
Ny lamba fakan-tsary mangarahara dia toy ny teo aloha, fampiharana izay mamela antsika hampiasa finday avo lenta miaraka amin'ny sary mangarahara, fampiharana izay mamela antsika hampiasa fampiharana isan-karazany toy ny kalandrie, hafatra an-tsoratra, fifandraisana ... hatramin'ny aseho mangarahara.
Ity rindranasa ity dia tsy manolotra asa fanampiny ho antsika, noho izany dia afaka mampiasa azy io hampiasa ny fakan-tsarin'ny terminal izahay ho toy ny rindrina, manome ny fahatsapana fa mangarahara tanteraka. Azo ampiasaina ity application ity ho anao misintona maimaim-poana miaraka amin'ny doka fa tsy misy fividianana fampiharana.
Developer: Fampiharana ShamiTech
Ny tena mampiavaka an'ity rindranasa ity dia ny ahafahanao manamboatra sary mivalona mangarahara mampiasa ny sary avy amin'ny fakantsary anoloana na dia afaka mampiasa ny fakantsary aoriana aza isika. Io dia ahafahantsika manova ny fomba fijery mangarahara sy ny zoom, satria ny alàlan'ny fakantsary no hany takiana takian'izy ireo.
Ny fampiharana hijanona tsy mandeha ho azy io rehefa misy miantso, zavatra izay tena vitsy ny fampiharana hafa no manao, satria ny ankamaroany mijanona ao aoriana. Transparent Screen dia azo alaina maimaimpoana maimaim-poana, misy doka fa tsy misy fividianana ao anaty app.
Horonan-tsary mivantana an-tsary
Transparent Live Wallpaper dia mampiasa ny fakantsarin'ny finday avo lenta mba hamoronana vokatra mangarahara. Io dia ahafahantsika mampiasa ny terminal anay mandritra ny diantsika, mandefa hafatra an-tsoratra ... satria afaka manao izany izahay jereo izay aseho ao ambadiky ny efijery.
Azo ampiasaina ity rindranasa ity fampidinana maimaim-poana, misy doka fa tsy misy fividianana fampiharana.
Wallpaper mivantana mangarahara
Developer: Fampiharana mpamorona horonan-tsary Bucket Photo
Ireo rindranasa nasehoko anao tamin'ity lahatsoratra ity dia ireo izay naoty tsara indrindra voaray nataon'ireo mpampiasa sy izay nanangona fampidinana betsaka kokoa.
Ao amin'ny Play Store dia afaka mahita rindranasa misimisy kokoa manao an'io asa io ianao tsy manolotra fampiasa fanampiny, noho izany amin'ireo fampiharana ireo dia mihoatra noho ny ampy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana rindrambaiko mangarahara tsara indrindra ho an'ny Android
Ahoana ny fomba hijerena ny teny miafina Wi-Fi voatahiry amin'ny Android